Apple Mac OS X 10.9.3 to feature 'Retina' hab loogu talagalay 4K bandhigay - Rule News
Apple Mac OS X 10.9.3 inuu ciyaaro 'isha’ hab loogu talagalay 4K bandhigay
Apple OS X Mountain Libaaxa
Sameeysa barnaamijyada software-Apple ayaa bilaabay seeding ay Mac OS X Mavericks 10.9.3 beta ay ku dhiirigelinayaan, kaas oo la sheegay in uu noqon doono in la sii daayo xiiso kuwa leedahay bandhigay 4K a.
Inkasta oo aan shaacin in qoraalada sii daayo Apple ee, 9to5Mac ayaa ogaaday in Mac OS X 10.9.3 samatabbixiyaa taageero kuwa ay Macbook ilaa khali in 4K bandhigay.
Milkiilayaasha Macbook socda Mac OS X 10.9.3 awoodaan in ay qarka u saaran in ay qaab 4K in uu ordo nidaamka qalliinka at a 'isha pixel-Laab noqon doonaa’ xallinta, taasoo keentay in content badan ka af shaashadda weyn. Ka hor inta update this, content ka Macbook ayaa kor u tusay doonaa kaliya baaxadda weyn leh xubno uu furmo suuqa kala bixin.
Waa maxay more, update software ah – taas oo ay u badan tahay in aan la sii dayn doono isbuucyo yar weli – u ogolaanaya ah bandhigay isha ee Macbook Pro si ay u taageeraan 4K bandhigay heerka helid of 60Hz a, taas oo ay u badan tahay ka dhigi doonaa bandhigay fiiriyaa badan macaan yahay marka loo eego wax soo saarka ee heerka helid of 24Hz ama 30Hz.
9to5Mac siiyey feauture cusub wareejin ah, gebogebaynta, “Imtixaanada xiran a Pro dabayaaqadii-2013 MacBook la isha bandhigay in 4K Seiki ah ula socdaan in ka badan HDMI. Running pixel-Laab on 4K bandhigay OS X macnaheedu waa content waa badan ka af badan yahay ka hor. Waxaa la mid ah sida socda a Pro isha ee MacBook ee xalinta caadiga ah isha ama sida la isticmaalayo isha ee iPhone ama iPad waa.”
news Tani waxay sidoo kale u muuqataa in ay soo jeedinayaan in Apple sii daayo doonaa bandhigay 4K xal goorey sanadkan, inkastoo weli shirkadda uu leeyahay in uu ku dhawaaqo in ay Doono. Sida laga soo xigtay warar xan ah, Si kastaba ha ahaatee, Shirkadda waxaa la soo koraya “xallinta sare qaab standalone”.
20127	1 4K xallinta, 9to5Mac, Apple, Mac OS, MacBook Pro, Macintosh, OS X, isha
← Malaysia Airlines lumiya xiriir la sidday diyaarad 239 dadka Sevastopol, goobta of guulaheedii Ruush, dooneysa inay 'gurigaaga tag’ →